जथाभावी पेन किलरको प्रयोगले मिर्गाैला रोगको जोखिम – डा. प्रेम ज्ञवाली - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशजथाभावी पेन किलरको प्रयोगले मिर्गाैला रोगको जोखिम – डा. प्रेम ज्ञवाली
बिहीबार विश्व मिर्गाैला दिवस । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मिर्गाैला रोगको बारेमा जनचेतना जगाउने एवं यसको न्यूनीकरणको लागि भन्दै २००६ देखि मार्चको दोस्रो बिहीबार यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो ।
पेट र ढाडको बीचमा दुवैतिर सिबीको आकारको ४–५ इन्च लामो एक अंग रहेको हुन्छ । त्यसैलाई हामी मिर्गाैला भन्छौं । यसले रगतमा मिसिएको फोहोरलाई पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाहिर फ्याँक्ने गर्छ । यसले खनिज र नुनलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छ । मिर्गाैला खराब हुँदा पिसाब धमिलो हुने, धेरै पटक वा कम पिसा लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, लगातार वाकवाकी आउने वा झाडापखाल लागिरहने, हात खुट्टा सुन्निने र छातीको पछाडिपट्टिको भाग सुन्निने गर्छ ।
नेपालमा अहिले वर्षेनि ३ हजार जनाको मिर्गाैलाका रोगी थपिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. प्रेम ज्ञवालीका अनुसार नेपाल एकमात्र त्यस्तो देश हो जहाँ हेमो डायलासिस र मिर्गाैला प्रत्यरोपण निःशुल्क गर्ने गरिन्छ । यद्यपि नियमित डायलासिसको लागि भनेर तोकिएकाबाहेक अन्य अस्पतालमा आकस्मिक डायलासिस गर्दा भने शुल्क लाग्ने गर्छ ।
विश्व मिर्गाैला दिवसको अवसरमा प्रा.डा. ज्ञवालीलाई मिर्गाैला रोग र यसको रोकथाको विषयमा हामीले ४ प्रश्न सोधेका छौं ।
बाबुआमालाई मिर्गौला रोग छ भने बच्चामा त्यो सर्ने जोखिम कति हुन्छ ?
अहिले नेपालमा देखिएका मिर्गाैला रोगको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ४ किसिमबाट मिर्गाैला रोग बल्झिएको देखिन्छ । पहिलो मधुमेह रोग लागेका मान्छेले गर्ने हेलचेक्रयाइँ हो । मधुमेहका रोगीले आफ्नो समस्यालाई बेवास्ता गर्दा मिर्गाैला रोग समेत निम्तिन सक्छ । दोस्रो रक्तचापका बिरामीले नियमि औषधि सेवन नगर्नु पनि यो समस्याको कारण हो । कतिपयले अलिकति सुधार हुनेबित्तिकै औषधि खान छाड्ने गरेको देखिन्छ । जुन पछि गएर मिर्गाैला रोगको कारण बन्न सक्छ ।
नेपालमा पत्थरीका बिरामीहरूमा समेत मिर्गाैलाको समस्या देखिएको छ । संख्याको हिसाबमा हेर्दा पत्थरीका रोगीमा मिर्गाैला खराब हुने कारण तेस्रो स्थानमा आउँछ । प्रश्नमा भनिए जस्तो बाबु आमालाई मिर्गाैलाको समस्या हुँदा छोराछोरीमा पनि यो समस्या देखिएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । जन्मँदै मिर्गाैलामा समस्या बोकेर जन्मिनुलाई पोलिसिस्टिक किड्नी डिजिज भनिन्छ । संख्याको आधारमा यसलाई चौथो कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
मिर्गाैला रोग कस्तो अवस्थामा डरलाग्दो हुन्छ र कस्तो अवस्था सामान्य हुन्छ ?
मिर्गाैला फेल हुने समस्या आफैँमा डरलाग्दो कुरा हो । मिर्गाैला रोग पत्ता लगाउने दुई वटा विधिहरू हुन्छन् । एउटा त यसमा लक्षण देखिन्छन्, त्यसपछि उपचार गराउन गइन्छ भने अर्काे पूरै मिर्गाैला खराब भइसक्दासम्म पनि यसमा लक्षण नदेखिन सक्छ । तर पनि मिर्गाैलाले कामै नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन सक्छ । त्यसैले आफूलाई केही पनि समस्या छैन भने पनि वर्षको एकपटक मिर्गाैला रोग छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिरहनु पर्छ । अर्काेकुरा मधुमेह र रक्तचापका बिरामीहरुले गर्ने लापरबाही पनि खतरनाक नै हुने गर्छ । त्यसैले यस्ता दीर्घरोगीहरुले नियमित औषधि खाने र बेलाबेलामा त्यसको परीक्षण समेत गरिरहुनपर्छ ।
मिर्गाैला रोग लागेकाहरुले कस्तो अवस्थामा डायलासिस गर्ने र कस्तो अवस्था प्रत्यारोपण गर्ने ?
मिर्गाैला रोग लागिसकेपछि सकेसम्म जतिसक्दो चाँडो मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । डायलासिस गर्ने विधि आफैँमा उपयुक्त होइन । यो मिर्गाैलामा समस्या भएपछि मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुपूर्वको बीचको समयमा गर्ने अस्थायी उपचार विधिमात्रै हो । यदि कहिलेकाहीँ मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न मिर्गाैला दिने मान्छे भएन भने त्यस्तो अवस्थामा डायलासिस गर्नुपर्छ । अन्यथा बिरामीले सकेसम्म डायलासिसभन्दा प्रत्यारोपणलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सकिन्छ भने डायलासिस नगर्दै प्रत्यारोपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मिर्गाैला रोग लाग्न नदिन र लागेपछि अपनाउनुपर्ने सावधानी के–के हुन् ?
मिर्गाैला रोग लाग्नै नदिनको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीले सुगर, प्रेसर जस्ता दीर्घरोगबाट बच्नुपर्छ । यी समस्याबाट सबैभन्दा धेरै मिर्गाैलामा समस्या देखिने गरेकोले यी समस्या भएका बिरामीले नियमित औषधि लिने, जीवनशैलीमा ध्यान दिने र समयसमयमा परीक्षण गरिरहनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जहिलै पनि पेनकिलर खाने काम बन्द गर्नुपर्छ । सामान्य मान्छेले पनि सधैं पेनकिलर खाइरहँदा मिर्गाैलामा हानि पुगिरहेको हुन सक्छ । साथै, मिर्गाैला रोगको कहिलेकाहीँ लक्षण नदेखिने भएकोले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनु पनि अनिवार्य हुन्छ ।
Previous articleकिन मुख्य सत्ता शर्त बन्दैछन् रेशम चौधरी ?
Next articleओलीको कदमपछि माधव नेपाल समूहले बोलायो स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक
कोरोनाको बहानामा चीनले गरेको अघोषित नाकाबन्दी शुचारु गराउन मन्त्रालय टोलिद्वारा अनुगमन